2010 sanadkii caqabada Soomaalida | Somaliska
Sanadka 2010ka ayaa ahaan doona mid Soomaalida Sweden ku nool ay xasuustaan asagoo lagu xasuusan doono dhibaatooyinkii ay kala kulmeen Soomaalidu ka dib caqabado kala duwan oo lagu soo ragay. Sanadka 2010-ka ayay ahayd markii Soomaalida guud ahaan laga joojiyay baasaboorkii ay kaga soo safri jireen wadama afrika. Xayiraadaan oo ay soo rogtay maxkamada socdaalka ee Sweden ayaa ahayd tii ugu darneyd ee soo wajahday Soomaalida ayadoo ilaa hadana taagan xalkeeduna uusan muuqan. Sanadka 2010 ayay ahayd markii sidoo kale uu baarlamaanka Sweden soo rogay xayiraad ku saabsan in qofka qof dalbanaya uu awoodo in uu kaafiyo, oo uu shaqo haysta, 4 sano wadanka joogey. Haddii xayiraada baasaboorka ay meesha ka baxdo waxaa sidoo kale dad badan oo aan caruur lahayn qabandoona sharcigaan kale. Sanadka 2010 ayay ahayd markii cunsuriyiinta Sweden ay baarlamaanka Sweden soo galeen taasoo ku sii kordhisay cadaadiska iyo naceybka loo qabo dadka soo galootiga ah ee ay Soomaalidu ku jirto, arintaan ayaa saameyn wayn ku yeelatay maskaxda dadka soo galootiga ah iyo sida ay dadka Swedishka ah u arkaan. Sanadka 2010ka ayay ahayd markii uu nin Muslim ah isku qarxiyay magaalada Stockholm arintaas oo ay cambaareen Muslimiinta Sweden balse keeni doonta shaki kala dhex gala dadka Swedishka ah iyo Muslimiinta. Balse sanadka 2010 ma wada ahayn xumaan ayadoo bilowgii sanadkaan uu ahaa mid durdur ah oo dadka soo galootiga ah qaasatan Soomaalida aad loo qaabilayay ayadoo ay wali fiicantahay arintaas. Sidoo kale sanadka 2010 ayay ahayd markii ay Sweden ku sameysay isbedel wayn nidaamka isdhexgal ayadoo hada ka bilaabata ay dadka cusub la wareegi doonto Laanta Shaqaaleynta Sweden kuwaasoo fursad fiican u ah dadka soo galootiga ah. Hadaba mowduuceena xiga waxaan ku eegi doonaa sanadka 2011 iyo rajada ay leedahay Bulshada Soomaaliyeed ee Sweden.
Sanadka 2010ka ayaa ahaan doona mid Soomaalida Sweden ku nool ay xasuustaan asagoo lagu xasuusan doono dhibaatooyinkii ay kala kulmeen Soomaalidu ka dib caqabado kala duwan oo lagu soo ragay.
Sanadka 2010-ka ayay ahayd markii Soomaalida guud ahaan laga joojiyay baasaboorkii ay kaga soo safri jireen wadama afrika. Xayiraadaan oo ay soo rogtay maxkamada socdaalka ee Sweden ayaa ahayd tii ugu darneyd ee soo wajahday Soomaalida ayadoo ilaa hadana taagan xalkeeduna uusan muuqan.
Sanadka 2010 ayay ahayd markii sidoo kale uu baarlamaanka Sweden soo rogay xayiraad ku saabsan in qofka qof dalbanaya uu awoodo in uu kaafiyo, oo uu shaqo haysta, 4 sano wadanka joogey. Haddii xayiraada baasaboorka ay meesha ka baxdo waxaa sidoo kale dad badan oo aan caruur lahayn qabandoona sharcigaan kale.
Sanadka 2010 ayay ahayd markii cunsuriyiinta Sweden ay baarlamaanka Sweden soo galeen taasoo ku sii kordhisay cadaadiska iyo naceybka loo qabo dadka soo galootiga ah ee ay Soomaalidu ku jirto, arintaan ayaa saameyn wayn ku yeelatay maskaxda dadka soo galootiga ah iyo sida ay dadka Swedishka ah u arkaan.
Sanadka 2010ka ayay ahayd markii uu nin Muslim ah isku qarxiyay magaalada Stockholm arintaas oo ay cambaareen Muslimiinta Sweden balse keeni doonta shaki kala dhex gala dadka Swedishka ah iyo Muslimiinta.
Balse sanadka 2010 ma wada ahayn xumaan ayadoo bilowgii sanadkaan uu ahaa mid durdur ah oo dadka soo galootiga ah qaasatan Soomaalida aad loo qaabilayay ayadoo ay wali fiicantahay arintaas.
Sidoo kale sanadka 2010 ayay ahayd markii ay Sweden ku sameysay isbedel wayn nidaamka isdhexgal ayadoo hada ka bilaabata ay dadka cusub la wareegi doonto Laanta Shaqaaleynta Sweden kuwaasoo fursad fiican u ah dadka soo galootiga ah.
Hadaba mowduuceena xiga waxaan ku eegi doonaa sanadka 2011 iyo rajada ay leedahay Bulshada Soomaaliyeed ee Sweden.